Akwụkwọ Tanya Singh na Martech Zone |
Edemede site na Tanya Singh
A na-atụ anya nha ahịa ịkwụ ụgwọ dijitalụ zuru ụwa ọnụ site na USD 79.3 ijeri na 2020 na USD 154.1 ijeri na 2025, na Compound Annual Growth Rate (CAGR) nke 14.2%. MarketsandMarkets Na nlọghachi, anyị enweghị ihe kpatara enwere obi abụọ na nọmba a. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla, ọ bụrụ na anyị echebara ọgba aghara coronavirus ugbu a echiche, uto na nkuchi ga-eme ngwa ngwa. Nje virus ma ọ bụ enweghị nje, ịrị elu nke ịkwụ ụgwọ kọntaktị adịlarị ebe a. Ebe ọ bụ na wallets smartphone dina